अब्रोड रिटर्न हिरोसँग एकछिन, भन्छन् : फिल्मलाई ‘हिरोइज्म’ चाहियो
By soniya on	 22nd September 2019 Highlights, अन्तर्वार्ता, समाचार
२३ वर्षे तन्नेरी अंकित शर्माको परिचयमा आउने शुक्रबारदेखि ‘हिरो’को प्वाँख थपिनेछ । अहिलेसम्म अशोक शर्माका छोराको पहिचानमा हुर्किएका उनी ‘रातो टीका निधारमा’ रिलिजसँगै ‘नायक’ बन्नेछन् । आफ्नै पहिचान बुन्ने श्रृंखला सुरु हुनेछ ।
हालैको एक संक्षिप्त बसाइमा उनी फिल्म र करियरबारे गफिए । उनलाई आफ्नै बाउ लिजेन्ड्री निर्देशक बन्नुमा भयंकर उत्साह छैन जति उनी आफ्नै इन्ट्युसन (मनदेखिको इच्छा)मा अभिनयमा करियर थाल्दैछन् । अशोक शर्माको छाप उनलाई मेट्नेछु र आफ्नै पहिचान बनाउनुछ ।
हुन त उनी, अब्रोड रिटर्न हुन् । मलेसियाको लिमकक विङ कलेजमा फिल्मको स्नातक पढाइ सके । परिवारै फिल्ममा भएकाले देश फर्किएर अभिनयमै करियर बनाउने ध्येयले उनका पाइला काठमाडौंतर्फ मोडिए । बुवा निर्देशित ‘जय भोले’मा सहायक भएर काम गरे ।
यतिबेला उनी निर्देशन हैन, हिरो भएर फिल्म खेल्दैछन् । रोचक कुरा, यतिबेला स्टारहरु पात्र र चरित्र उन्मुख हुँदैछन् । तर, अंकितलाई पात्रमा खुम्चिनु छैन बरु लार्जर द्यान लाइफ फिल्मको हिरो बन्नुछ । ‘दर्शकले एकछिन भएपनि दुःख बिर्सिएर मलाई उनीहरुको समस्या सल्टाउने हिरोको रुपमा लिउन भन्ने चाहना छ’ उनी सुनिए ।
उनी नेपाली फिल्ममा हिरोको खोजीमा छन् र उनी हिरो बन्न चाहन्छन् । उनको परिभाषामा फिल्म मनोरञ्जन हो । मनोरञ्जनमार्फत सामाजिक मुद्दालाई देखाउन सकिने धारणा उनको छ ।
अनि रातो टीका निधारमा के त ? अंकितले यसमा एक तन्नेरी जो विदेश पढ्न जान चाहन्छ र यसका लागि पैसा संकलन गर्न गाउँका युवालाई विदेशमा पठाउने पात्रको भूमिका गरेका छन् । ‘अहिले नेपाली युवालाई घाँसको अर्को भाग हरियो छ भन्ने मात्र भ्रम छ ।
भन्नुको अर्थ विदेशमा गयो भने सबै समस्या सल्टिन्छ’ अंकित भन्छन्, ‘हामीले फिल्ममार्फत ब्रेन ड्रेनसहितका सामाजिक मुद्दालाई पनि चित्रण गरेका छौं ।’ दर्शकले आफ्नो पात्रलाई निकै इन्जोय गर्ने विश्वास जुनियर शर्माले लिएका छन् ।
पात्रमा डुब्न अंकितले के मात्र गरेनन् ? बुवालाई लिएर झापाली गाउँ डुले र मान्छे भेटे । अनि बुझे वैदेशिक रोजगारीको मुड ।
स्कुलमा छँदा अंकितले नाटक गरे, नृत्य सिके । यो हुटहुटीले उनलाई अभिनय गर्न कठिन भएन । ‘रातो टीका निधारमा’ बोलको गीतमा उनले साम्राज्ञी शाहसँग राजेश–करिश्मालाई भुलाइदिने रसायनको निर्माण गरिदिएका छन् ।
अंकितको भनाइमा फिल्मभित्रको गैंडे गाउँ एउटा फिक्सनल थलो हो । यो फिक्सन गाउँमा कथा बुनिएको छ । यही गाउँमा साम्राज्ञी एक महिला उद्यमीको भूमिकामा छिन् । प्रस्तुतिकरणमा नयाँ स्वाद भएकाले दर्शकले फिल्ममा इन्जोय गर्ने आशा यी ठिटाले व्यक्त गरे ।
देश फर्किएपछि अंकितको ठम्याइ के हो जहाँ फिल्मले हप्तैपिच्छे सेटब्याक मात्र खान्छ । ‘फिल्मलाई गम्भिर पेशाको रुपमा कसैले लिएको पाइँन’ उनी भन्छन्, ‘बहुमत मान्छेहरु यसलाई हल्का कामको रुपमा मात्र लिने भेटाएँ ।’ यसलाई उनी मुख्य कमजोरी ठान्छन् ।
अंकित अभिनित रातो टीका निधारमालाई उनको परिवारले निर्माण एवं निर्देशन गरेको हो । सजिलो त हुने नै भयो, तर उनमा आफ्नै पहिचान बनाउने अठोट छ । यो फिल्म असोज १० गतेदेखि प्रदर्शन हुँदैछ ।